Ahoana ny fomba iarahan'ny Andian-kolontsaina sy kolontsaina marobe any Tranifornia mpizahatany sy ny mponina ao an-toerana
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ahoana ny fomba iarahan'ny Andian-kolontsaina sy kolontsaina marobe any Tranifornia mpizahatany sy ny mponina ao an-toerana
Oktobra 6, 2018
Hetsika fizahan-tany eo an-toerana any Tranifornia no antenaina hisarihana olona avy amin'ny firenena 20 tsy EU hafa, izay monina ao Brasov ary mitsidika ny faritra.
Hetsika fizahan-tany eo an-toerana any Tranifornia no antenaina hisarihana olona avy amin'ny firenena 20 tsy EU hafa, izay monina ao Brasov ary mitsidika ny faritra. Brosov no tranon'ny arabe tery indrindra any Eropa ary toerana mety hankalazana.
Ny olona avy amin'ny fiaviana eropeana samy hafa dia hanolotra amin'ny asabotsy izao, any Piata Sfatului, ny fomban-drazany ary ny fomba amam-panao amin'ny fanamarihana ny andiany faha-6 amin'ny Andiam-kolontsaina marolafy.
Brașov dia tanàna iray ao amin'ny faritr'i Tranifornia, Romania, izay misy ny Tendrombohitra Carpathian. Fantatra amin'ny rindrina sy bastion sionie tamin'ny taonjato fahagola, ilay fiangonana Black style Gothic mijoalajoala ary kafe mafana. Piaţa Sfatului (Kianja filankevitra) ao amin'ny tanàna tranainy misy rarivato dia voahodidin'ny tranobe baroque miloko ary tranon'ny Casa Sfatului, tranom-pokonolona teo aloha izay nivadika tranombakoka teo an-toerana.
Nopetehin'ny tampon'ny Tendrombohitra Carpathian atsimo ary marefo amin'ny maritrano gothic, baroque ary fanavaozana, ary koa manan-tantara manintona, Brasov dia iray amin'ireo toerana be mpitsidika indrindra any Romania.
Niorenan'ny Knights Teutonic tamin'ny 1211 tao amin'ny tranokala Dacian taloha ary nonina ny Saxons ho iray amin'ireo fitoerana manda * misy rindrina *, i Brasov dia nanisy ambiansy fahagola tamin'ny vanim-potoana ary nampiasaina ho toy ny sary miverina amin'ny sary mihetsika tato ho ato.
Ny toerana misy ny tanàna eo amin'ny fihaonan'ireo làlam-barotra izay mampifandray ny Fanjakana Ottoman sy Eropa andrefana, miaraka amin'ny fanavotana hetra sasany, dia namela ny mpivarotra sakson hahazo harena be ary hanana hery politika matanjaka any amin'ny faritra. Hita taratra tamin'ny anaran'ny tanàna alemanina, Kronstadt, ary koa amin'ny anarany latina, Corona, izay midika hoe Crown City (noho izany, ny palitaon'ilay tanàna izay satro-boninahitra misy faka faka). Niorina nanerana ny tanàna ny fanamafisam-peo ary nitarina hatrany, miaraka amina tilikambo maromaro notazonin'ny guilds asa tanana isan-karazany, araka ny fomba amam-panao medieval.
Ankoatry ny fampisehoana nataon'ny fireneny sy ny fitafiany nentim-paharazana, ireo mpandray anjara dia nampiseho koa saina, zavatra vita amin'ny tanana kely, hosodoko nentim-paharazana, vatomamy na mofo nentim-paharazana mihitsy aza, izay naseho teo amin'ny fiantsonan'ny Piata Sfatului.
Ny mponina Brasov sy ireo mpizahatany dia nahazo «pasipaoro» noforonin'ireo mpikarakara ny hetsika, izay misy ny "visa" fametahana tena ho fanasana an'ohatra hamakivaky ny firenena tsirairay avy.
“Nitombo isan-taona ny hetsika. Raha ny fanontana voalohany azontsika natao tao amin'ny tranon'ny mpianatra any Brasov, dia eto izahay amin'ity andiany faha-6 ao Piata Sfatului ity. Ny fangatahana dia avo dia avo avy amin'ireo vahiny monina any Brasov ary te-ho tonga amin'ity hetsika ity, izay mahafaly anay. Nanonta pasipaoro miisa 500 fotsiny izahay ho an'ity hetsika ity, izay efa lasa tao anatin'ny adiny iray. Ny Andian-kolontsaina maro any Brasov dia hetsika iray andrasan'ny olona ary teo anilanay koa ny toetr'andro ho an'ity fanontana ity, ”hoy i Astrid Hamberger, mpandrindra ny Centre Regional for Integration of Foreigners any Brasov, mpikarakara ny hetsika, tamin'ny AGERPRES.
Camilla Salas, 32 taona, avy any Columbia, dia nonina tao Brasov nandritra ny roa taona sy tapany lasa izay, taorian'ny nanambadiany mponina Brasov. Mianatra ny fiteny romanianina ao amin'ny Ivontoeram-paritra ho an'ny fampidirana ireo vahiny izy.
“Faly be aho mipetraka any Brasov. Tao anatin'ny roa taona sy tapany dia nahazo namana maro teto aho. Nihaona tamin'ny vadiko niverina tany Columbia aho, izay niasa kelikely. Nanaiky ny ho any Romania aho ary hipetraka any Brasov ary nahazatra ahy izany haingana be. Tsy olana ny toetrandro. Rehefa mangatsiaka aho dia mitafy akanjo bebe kokoa. Faly aho eto. Ho an'ny Noely sy ny Taom-baovao dia handeha any Columbia izahay ary ny teknolojia ananantsika androany dia mamela ahy hiresaka amin'ny reniko sy ny fianakaviako isan'andro. Ny tanànako dia tsy mitovy amin'i Brasov, manana hazo rofia any isika, fa hanana hazo krismasy artifisialy ihany koa, ”hoy i Camilla Salas tamin'ny AGERPRES.
Nilaza ihany koa izy fa nahomby tao anatin'ny roa taona nianatra tsara ny fitenin'ny firenena nitaizany azy, indrindra noho ny rafozany, avy any Brasov, izay tsy namela azy hiteny fiteny hafa noho ny Romanian, izay manampy azy betsaka , satria mila mandray ny tafa sy dinika izy hahazoana ny zom-pirenena romanianina amin'ny fotoana iray.
Ny mpitsidika ao Piata Sfatului dia notolorana fampisehoana dihy nentin-drazana ihany koa avy any Kiobà, Mexico, Filipiana, Sina, Japon, ny Repoblika any Moldova, Peroa, ny Repoblika Dominikanina ary ny diabe fanaingoana an-tsehatra eny an-toerana.
Ireo firenena toa ny Repoblika Dominikanina, Columbia, Syria, Korea atsimo, Japon, Filipiana, Peru, Mexico, ny Repoblikan'i Moldova, India, Torkia, Sina, Ukraine, Jordania, Nizeria, Israel, Egypt, Ecuador, Iran dia nitondra fampisehoana ihany koa tamin'i Piata Sfatului.
Ny Andron'ny kolontsaina marolafy ao amin'ny Fetiben'ny Brasov dia nialohavana fanaratsiana ny fampirantiana "Portraits of Migration", izay natao ny zoma alina tao amin'ny Patria Hall ary hofaranana ny alahady hariva, ao amin'ny Ivon-kolontsaina marolafy ao amin'ny Oniversite Transilvania, izay misy hotontosaina ny fandefasana ny sarimihetsika “Stranger in Paradise”, arahin'ny adihevitra momba ny olan'ny mpitsoa-ponenana any Eropa.
20 no maty tany amin'ny toerana fizahan-tany New York taorian'ny fianjeran'i Limo nahatsiravina
Ny Delta Air Lines A220 dia miainga voalohany